Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 25)
Ahoana ny fanavaozana ny Gmail amin'ny kinova farany, Gmail 4.5 miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
Rohy fampidinana mivantana sy fomba fametrahana ny kinova vaovao an'ny Gmail 4.5 ho an'ny terminal Android.
Sintomy ny Neymar Live Walpapers ho an'ny terminal Android-nao
Fampiharana maimaimpoana azo jerena ao amin'ny Play Store miaraka amina sary mihetsika na Live Wallpaper an'ny kintana Breziliana vaovao ary ny fanaovan-tsonia vaovao nataon'i Barça Neymar.
Ny Nexus Media Importer dia mamindra sy milalao ny fisieo avy amin'ny fahatsiarovanao USB nefa tsy ho faka
Ny Nexus Media Importer dia mamindra sy mandefa rakitra multimedia avy amin'ny fahatsiarovana USB toy ny horonan-tsary, sary ary mozika nefa tsy mila miorim-paka.
Misy ny Ady lehibe Z izao
Nivoaka izao ny Ady lehibe Z, lohateny fampiroboroboana ny sarimihetsika nilalao an'i Brad Pitt.
Sintomy ary apetraho Huawei Launcher ho an'ny Android terminal
Fampidinana sy fametrahana mivantana ho an'ny Android terminal an'ny Huawei Launcher miaraka amin'ny interface Emotion UI 1.5
Duolingo ny fampiharana tsara indrindra hianarana teny anglisy azo alaina ao amin'ny Google Play
Duolingo, maimaim-poana misintona amin'ny Google Play sy ny fomba tsara indrindra hianarana ny teny Anglisy amin'ny findainao, miaraka amin'ny karazana fanazaran-tena mifanaraka amin'ny haavonao
Fanavaozana ny Kalandrie Google miaraka amin'ny loko namboarina sy maro hafa
Google Calendar dia mitondra safidy vaovao hanamboarana ireo hatsarana hita maso amin'ireo hetsika sy fanendrena izay ananantsika ao amin'ny kinova vaovao ho an'ny androany.
Google dia manambara ny kinova Gmail vaovao, mifantoka amin'ny fifehezana tanteraka ny boaty
Google dia niasa herintaona nitondra anay ity kinova Gmail vaovao ity izay nisy fanatsarana lehibe tao anaty boaty ary niova ny endrika hita maso.
Sintomy sy apetraho ireo fampiharana haino aman-jery Sony ho an'ny fitaovana rehetra
Eto ianao dia manana ny fomba fametrahana ary ny rohy fampidinana mivantana an'ny Sony media Apps manan-kery ho an'ny Android terminal.
Ny fampandrenesana rehetra ao amin'ny birao misy anao noho ny fampandrenesana Android Dropbox
Ny fampiasana Dropbox ity fampiharana Android vaovao Dropbox mahaliana sy vaovao ity dia ahafahanao mahazo fampandrenesana avy amin'ny findainao eo amin'ny biraonao
Aiza ny ranoko? mahazo fanavaozana mifantoka amin'i Allie
Aiza ny ranoko? Makà ambaratonga vaovao mifantoka amin'i Allie, ny voay Swampy dia mankahala azy.
Pixel Press, sariho ny lalao platformer anao
Pixel Press, tetikasa iray tany am-boalohany, dia mila fanomezana ara-bola ao amin'ny Kickstarter.
Ny ekipa ao ambadiky ny Go Launcher dia mandefa Next Browser, mpizaha tranonkala iray izay hanome betsaka horesahina
Fahagagana tena mahafinaritra manaraka Browser noforonin'ny ekipa ao ambadiky ny Go Launcher ary izay mitondra ny hatsaram-panahy rehetra amin'ny fifaninanana rehetra amin'ny tranonkala iray ihany.
Misy ny mpandefa Google Glass hitsapana fisaorana an'i Zhouwei
Zhouwei, redditer, dia namoaka fampiharana Google Glass marobe ary namorona apk ny mpandefa izay azonao ampiasaina amin'ny Android rehetra.
Nahazo fanavaozana lehibe ny Google Drive miaraka amina kinova vaovao izay manampy interface tsara amin'ny Google Now sy ny fizahana antontan-taratasy.
Android Launcher: LG Launcher ho an'ny fitaovana rehetra
Sintomy ary ahitsy ny fametrahana LG Launcher, LG's Launcher azy manokana ho an'ny fitaovana Android rehetra.
Fampidinana mivantana ny rindranasa Google zanatany nohavaozina tao amin'ny Google I / O 2013
Eto izahay dia entinay misintona mivantana ny apk farany an'ny rindranasa Google zanatany nohavaozina ao amin'ny Google I / O 2013
Fanavaozana ny Hangouts, napetraka farany ary niasa tanteraka
Omaly dia nitaraina momba ny olana natolotry ny Hangouts ho an'ny mpampiasa marobe izahay, ary androany dia vahan'ny Google indray mandeha ny olana rehetra.
Olana maro samihafa amin'ny fandefasana Hangouts
Olana maro amin'ny Hangouts amin'ny fandefasana azy amin'ny fitaovana Android samihafa toy ny kinova finday sy takelaka.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny Gtalk mankany Hangouts
Fampianarana tsotra hanavaozana sy hanoloana ny Gtalk miaraka amin'ny Hangouts, ilay fampiharana fandefasan-kafatra vaovao atolotra ao amin'ny Google I / O 2013
Ny Ady lehibe Z dia hanana ny lalao ho an'ny Android
Ny Ady lehibe Z dia hanana lalao ofisialy izay hivoaka amin'ny volana Jona. Atorinay anao ny tranofiara.
Manomboka androany dia azonao atao ny mampakatra ny anao manokana PDFs sy EPUBs ao amin'ny Google Play Books
Lohateny 1000 no azo apetraka manomboka anio mankany amin'ny application Google Play Books, ahafahanao mampiasa ny endrika fisie Pdf sy Epubs izay fampiasa indrindra.
Fampandrenesana an-doha amin'ny lohahevitra Chat ho an'ny Android
Floating Notification dia rafitra fampandrenesana an-doha amin'ny lohan'ny Facebook Home Chat Heads mety amin'ny terminal Android rehetra.
"Artemis Spaceship Bridge Simulator" dia tonga amin'ny Android
Simulator habaka mihoatra ny mendrika no tonga amin'ny Android, Artemis Spaceship Bridge Simulator.
Google Now Wallpaper HD, Wallpaper tsy ofisialy
Avy amin'ny XDA dia mipoitra ny Google Now Wallpaper tsy ofisialy izay afaka mameno tsara an'i Google Now eo amin'ny biraonao.
Nova Launcher nohavaozina amin'ny kinova 2.1
Vaovao farany an'ny Nova Launcher miaraka amina endrika vaovao toy ny menio wallpaper, famahana bibikely isan-karazany ary fanamafisana ny fampiharana.
Ny fanaraha-maso ny tongotra dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra
Pie Control dia mpandefa iray izay afaka atambatra amin'ny trano rehetra ary miafina mandra-piantsoan'ny mpampiasa azy.
Solo Launcher, mpandefa haingana sy miasa
Solo Launcher dia fanoloana an-trano tena mahomby sy haingana ho an'ny Android, izay mirehareha amin'ny safidy fanovana maro.
MONOPOLY Maimaimpoana ho an'ny Android nesorina tao amin'ny Play Store noho ny scam
MONOPOLY Free dia nesorina tao amin'ny Play Store noho ny fisolokiana ho an'ireo mpampiasa nametraka azy io tao amin'ny terminal-dry zareo
Manaova kaonty WhatsApp 2 miaraka amin'i FonYou
Azo antoka fa efa nitranga taminao izany fa te hiresaka amin'ny olona amin'ny WhatsApp ianao, saingy tsy te hanome azy ireo ny nomeraon-telefaonanao manokana, ...
Monkey Boxing, ady gidro amin'ny findainao
Monkey Boxing, avy amin'ny Lalao Crescent Moon, dia manome antsika ny mety hiadiana amin'ny gidro.
4 Pics 1 Word - Lalao maminavina tena mampiankin-doha
Amin'ity lalao ity dia manome sary 4 sy litera 12 eto ambany amin'ny efijery izy ireo amin'ny alàlan'ireo ...
Androse Launcher, ny fisehoan'ny Windows 8 amin'ny Tablet Android anao
Androse Launcher dia mpandefa maimaim-poana ho an'ny Android izay hanome antsika ny fisehoan'ny Windows 8 vaovao
ReadItToMe, mamaky ny fampandrenesanao sy ny antso an-tsenao io
ReadItToMe dia mpanampy an'ny Android afaka mamaky mafy ny fampandrenesana ny terminal anao.
Music.Mind Player, mpilalao audio hafa
Music.Mind Player dia mpilalao audio ho an'ny Android, izay na dia ao amin'ny kinova Beta aza dia manome antsika safidy vaovao sy fanampiny fanampiny
Gangstar Vegas, tetik'asa vaovaon'i Gameloft
Gameloft dia efa nanomana ny famoahana vaovao, Gangstar Vegas.
Pixel Kingdom, RPG stratejika
Pixel Kingdom dia fifangaroan'ny karazana malaza toy ny fiarovana ny tilikambo sy RPG.
Ahoana ny fametrahana apetraka amin'ny fizarazarana natokana ho an'ny rafitra amin'ny alàlan'ny System Apps Installer (ROOT)
8 Bits Live Wallpapers, sary mihetsika an'ny lalao 80's
8 Bits Live Wallpapers dia rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny Android miaraka amina sary mihetsika tsara indrindra amin'ny lalao video kilasika.
Solstice Arena, MOBA vaovao ho an'ny Android
Solstice Arena no ho Zynga vaovao, MOBA izay havoaka amin'ny iOS, Android ary PC.
Ny lalao "Ady mozika" an'i Snoop Dogg dia ho tonga amin'ny Android ihany koa
Ny lalao Snoop Dogg, Way of the Dogg, dia ho tonga amin'ny Android sy iOS amin'ity fahavaratra ity.
Fampiharana tsara indrindra ho an'ny asa amin'ny takelaka Android
Kingsoft Office Na dia misy aza ny fampiharana mitovy amin'izany, ny Kingsoft Office dia iray amin'ireo safidy birao malalaka tsara indrindra avy amin'ny Google ...
MIUI V5 Launcher natao ho an'ny Takelaka
Fampidinana mivantana ny kinova vaovao an'ny MIUI Launcher ao amin'ny kinova V5 natao manokana sy namboarina ho an'ny Takelaka
Ahoana ny fomba famoronana karatra matihanina amin'ny kaody QR miaraka amin'ny Cardfix
Miaraka amin'ny Cardfix dia hamorona mora foana ny karatra fandraharahana matihanina izahay ary hiteraka kaody QR mivantana hitahiry ao amin'ny terminal anay.
Angry Birds Friends dia azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny
Ny kinova vaovao an'ny Angry Birds, antsoina hoe Angry Birds Friends ary miaraka amin'ny maody lalao an-tserasera, dia eto maimaim-poana.
Fampiharana Chorras amin'ny herinandro: Ny boriky anio miresaka
Buttman: Ny Talking Ass dia fampiharana tsy mahalala fomba sy tsy mahalala fomba, tsy mety amin'ny zaza tsy ampy taona, izay nahazo ny anaram-boninahitra Crazy Apps amin'ny herinandro.
Kalandrie ++ Maimaimpoana, kalandrie misy safidy maro
Calendar ++ Free dia fampiharana maimaim-poana ao amin'ny Play Store izay hanisy fiasa vaovao amin'ny kalandrie default amin'ny rafitray.
Mpandefa ho an'ny Android: Vire Launcher
Vire Launcher dia mpandefa maimaim-poana ho an'ny Android misy anay, iray amin'ireo mpandefa tsara indrindra ho an'ny Android izay azoko andramana amin'ny findaiko.
Reactiv Dialer Free, manova ny dial pad an'ny Android-tsika
Reactiv Dialer Free dia rindranasa maimaimpoana hahafahantsika manome safidy maro hafa sy fanovana endrika ivelany amin'ny dial Android anay
Iron Man 3: ny lalao ofisialy, misy izao
Ny lalao ofisialy Iron Man 3 dia efa hita ao amin'ny Google Play Store ankehitriny.
Arovy amin'ny Cerberus ny terminal Android anao
Cerberus dia fampiharana miaraka amin'ny fitsarana maimaimpoana mandritra ny fito andro izay hampiasaina hanarahana ny fitaovanay raha sanatria very na mangalatra.
Rindrambaiko mpamorona, fomba tsara hanombohana amin'ny maha developer
Raha efa voakaikitry ny bibikely fampandrosoana ianao ary tsy manam-potoana hianarana, na hitanao fa mahaliana ny mamorona ...
Manatsara ny fanjifana RAM sy bateria miaraka amin'ny Greenify
Greenify dia rindranasa maimaimpoana ao amin'ny Play Store izay ahafahantsika mitahiry amin'ny loharanon-karena bateria sy rafitra amin'ny alàlan'ny fampiharana hibernation.
Ahoana ny fomba famoronana Bin Recycle amin'ny Android
Amin'ity fampianarana mini-manaraka ity dia hamorona Recycle Bin ao amin'ny rafitra fiasa Android izahay.
Ny varavarankely mitsingevana amin'ny fitaovana Android rehetra
Miaraka amin'ny rindranasa izay atolotray eto ambany, dia hahatratra ny fiasan'ny fikandrana mitsingevana ao amin'ny terminal Android misy ny kinova 2.1 na avo kokoa.
Ahoana ny fomba fampidinana maimaim-poana ny mozika tianao amin'ny terminal Android anao manokana amin'ny Search and download Mp3 Pro
Ahoana ny fomba fampidinana maimaim-poana ny mozika tianao amin'ny terminal Android anao manokana amin'ny Search and download Mp3 Pro, fampiharana maimaim-poana misy ao amin'ny Play Store.
Sintomy ny kinova farany avy amin'ny Play Store
Eto izahay mitondra anao ny kinova farany an'ny fivarotana fampiharana Android, Play Store 4.0.27.
Unity Launcher, ny mpandefa Ubuntu amin'ny Android
Unity Launcher dia mpandefa iray hafa tanteraka noho izay efa fanaontsika amin'ny Android, miaraka amin'ny fisehon'ny Ubuntu Launcher.
Fampiharana ExDialer & Contacts hanovana ny fisehoan'ny Android anao
ExDialer & Contacts dia rindranasa maimaimpoana izay manome anay Dialer sy boky mifandray amin'ny fomban'ny rôma Miui.
Wifi File Transfer Pro fanavaozana vaovao
Wifi File Transfer Pro dia mpizara / mpizara tranonkala ahafahanao mampakatra sy misintona rakitra amin'ny alàlan'ny fifandraisana Wifi
Fampiharana Awesome Note, fampiharana Galaxy Note 8 naoty azo alaina
Ny fampiharana Awesome Note dia fampiharana an-tsoratra an'ny Samsung Galaxy Note 8 ary efa rakotra sy azo apetraka amin'ny fitaovana hafa.
Fampandrenesana eo amin'ny efijery hidinao miaraka amin'ny Widget Screen Notification
Notification Screen Widget dia rindrambaiko maimaimpoana ahafahantsika mandray fampandrenesana mivantana amin'ny efijery hidin-tranonkalanay Android.
Ahoana ny fametrahana ny Play Station Mobile amin'ny fitaovana Android rehetra
Fomba fametrahana ny Play Station Mobile vaovao amin'ny terminal Android miorim-paka miaraka amin'ny fanamboarana novaina.
Browser iray, mpitety tranonkala maimaimpoana tsara
One Browser dia mpizaha tranonkala maimaimpoana ho an'ny Android izay ny hafainganam-pandeha sy ny fiasa no antony mahatonga azy.
Clean Master, fitaovana iray rafitra hitandrina ny Android ho madio
Clean Master dia rindranasa rafitra maimaimpoana izay hanampy antsika hitazona ny terminal Android tsy hadio.
RoundR, boribory ny zoron'ny efijery Android anao
RoundR dia rindranasa Open Source maimaimpoana izay ahafahantsika manome fahatsapana zoro boribory ho an'ny fitaovana Android.
GT Launcher Prime, mpandefa maimaim-poana sy tsara ho an'ny Android
GT LLauncher Prime dia mpandefa maimaim-poana tanteraka ho an'ny Android miaraka amina endri-javatra na safidy manokana.
Fampiharana fialamboly tsara indrindra ho an'ny takelaka Android
MX PLAYER Heverina ho mpilalao horonantsary tsara indrindra, MX PLAYER dia manana tombony toy ny decoding fitaovana sy ...
3 Cube Music Player, mpilalao mozika maimaimpoana mahatalanjona
3 Cube Music Player dia mpilalao mozika 3D mahatalanjona ho an'ny Android ary maimaim-poana tanteraka
Ampahafantaro ahy!, Fampandrenesana avy amin'ny fampiharana rehetra eo amin'ny efijery hidinao
Mampandre ahy! dia rindrambaiko maimaimpoana tanteraka tsy misy fetrany ahafahantsika mifehy ny fampandrenesana avy amin'ny efijery mamoha.
Azo alaina izao ny Racing CSR
CSR Racing dia lalao fifaninanana mifantoka amin'ny tarika.
Monster Blade, mihaza biby goavam-be amin'ny sombin-javatra
Monster Blade dia zavatra toy ny Monster Hunter ho an'ny finday.
Fandraisana Facebook, mpandefa an-tsary na fampiharana amin'ny efijery feno?
Ny hatsaran-toetra lehibe sy ny lesoka amin'ny Facebook Home, azo raisina ho mpanavola ve izany sa fampiharana amin'ny efijery feno fotsiny?
Asongadino, fehezo ny findainao
Monect dia fampiharana an'ny mpampiasa XDA Developers izay ahafahanao mifehy ny PC amin'ny findainao.
Fampiharana sy gadget Android mahaliana: breathalyzer azo entina
Androany dia manolotra gadget mahaliana izahay izay miaraka amin'ny fampiharana ho an'ny Android. Breathometer dia breathalyzer azo entina amin'ny Android
Milalao Beta Free Music Player izao
Now Playing dia mpilalao mozika vaovao ho an'ny Android miorina amin'ny kaody loharano an'ny Apollo Music Player.
Ahoana ny fametrahana ny Facebook Home vaovao amin'ny fitaovana rehetra
Misy ny Facebook Home amin'ny karazana fitaovana rehetra, miaraka amin'ny fanovana Katana.
Facebook Home, apk misintona
Eto izahay dia miraikitra amin'ny fisintomana mivantana ny APK an'ny Facebook Home azo apetraka mivantana avy amin'ny fitaovana mifanentana.
Top 10 lalao karatra maimaim-poana
Android dia manana safidy maro hilalaovana sy hankafizanao ny fotoana malalaka, na dia tsy tokony hanadino ireo fomba aza isika ...
Ahoana ny famongorana ny kinova vaovao an'ny Play Store 4.0.25
Fampianarana tsotra hiverenana amin'ny kinova fampiharana fivarotana Android teo aloha, ny Play Store 4.0.25
Ahoana ny famongorana ny terminal anao amin'ny tsindry iray monja
Fampiharana azo alaina ao amin'ny Play Store izay ahafahantsika manafoana karazana terminal Android, na inona na inona marika na kinovan'ny Android.
Ny Real Racing 3 dia mahazo ny fanavaozana voalohany
Ny Real Racing 3 dia havaozina amin'ny alàlan'ny fandraisana atiny mifandraika amin'ny Chevrolet.
Ahoana ny fampidinana sy fametrahana ny tsimbadika vaovao an'ny Play Store 4.0.25
Avelanay eto aminao ny kinova Google Play na Play Store 4.0.25 vaovao, mampiditra fampianarana video momba ny fametrahana azy sy ny fampiasana azy izahay.
Warner Bros dia manohana Android amin'ny lalao roa
Warner Bros dia mandefa lalao roa amin'ny Android, indrindra amin'ny Amazon App Store.
Nightsky HD misy amin'ny Android izao
Nightsky HD, aorian'ny diany mamaky ny PC dia tonga amin'ny Android.
Ahoana ny fomba hanomezana ny fisehoan'ny iPhone amin'ny Android
Fampiharana maimaimpoana roa azo jerena ao amin'ny Play Store izay hanomezanay ny fisehoan'ny Apple iPhone nefa tsy very ny tombony azo amin'ny Android.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny ROM android
Androany aho hiresaka momba ireo ROM Android, inona izany? , Tombony sy lafy ary Ahoana ...
Chat Heads, ampiasao Facebook Messenger amin'ny fampiharana rehetra
Iray amin'ireo zava-baovao farany ao amin'ny Facebook Home ny Chat Heads, fitaovana iray ahafahantsika mampiasa Facebook Messenger avy amin'ny fampiharana rehetra.
Hitman: ICA, ny fampiharana ofisialy ho an'ny Android
Agent 47 dia efa manana ny fampiharana finday tonga lafatra, Hitman: ICA.
Shadowgun: Deadzone 2.0 dia fanavaozana lehibe
Nahazo fanavaozana goavana ny Deadzone marobe an'i Shadowgun.
DivX Stash, mamorona playlist miaraka amin'ny mozika amin'ny Internet
DivX Stash dia natokana amin'ny fomba manokana ho an'izay rehetra mitondra mozika amin'ny Internet, tsy mila misintona izany amin'ny solosaina.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny fampiharana amin'ny arina
Ato amin'ity lesona vaovao ity dia asehoko anao ny fomba fanaovan-tsimbadika ny rindranasa rehetra sy ny angon-drakitra ampiasainao amin'ny alàlan'ny Carbon, fampiharana maimaim-poana tanteraka.
Ahoana ny fampiasana fivarotana fampiharana Android amin'ny PC, Google Play
Google Play no kinova an-tranonkala an'ny fivarotana fampiharana Android Play Store, ary amin'ity torolàlana tsikelikely ity dia asehonay anao ny fomba fampiasana azy tsara.
Fampiharana mahasoa 6 rehefa "faka" ianao (Haavo antonony avo lenta)
Androany, entiko ho anao ireo fampiharana 6 hafa, ny sasany sarotra kokoa ny mitantana ary mampidi-doza kokoa ...
Gamestick ary lalao fandefasana
Gamestick, console an'ny PlayJam, dia ho avy miaraka amin'ny lalao efa napetraka. Lazainay aminao hoe iza amin'ireo.
Buzz Launcher, mpandefa iray feno fanaingoana
Androany isika dia miresaka momba ny Buzz Launcher, mpandefa mpandahatra tena azo ovaina, miaraka amina fikirana marobe izay mijoro hijoro amin'ireo lehibe amin'ity fizarana ity toa an'i Nova
Fampiharana Chorras amin'ny herinandro, anio: Calculator Love
Love Calculator dia nahazo ny fampidirana azy ao amin'ny lisitry ny apps cool an'ny Androidsis mandritra ny herinandro.
Google Translate dia havaozina mba hanolotra maody ivelan'ny seranana
Amin'ity fanavaozana farany ny Google Translate ity dia tafiditra ao ny maody ivelan'ny offline na ivelan'ny offline mba tsy mila fifandraisana data mavitrika.
FxGuru, ny vokatry manokana ny sinema amin'ny fitaovanao Android
Miaraka amin'ny FxGuru dia afaka manampy effets nomerika avy amin'ny sinema amin'ny horonantsarinay izahay, amin'ny endrika Hollywood madio indrindra. Mitondra vokatra maro izany, hahafahanao mahavita seho mahafinaritra
Ahoana ny fametrahana ny tsipika amin'ny solo-sainanao manokana
Fampianarana tsotra hahazoana fampidinana maimaimpoana sy hametrahana amin'ny solo-sainanao manokana. Ahitana video miaraka amin'ny torolàlana isaky ny dingana.
Walk Me Up, famantaranandro fanairana mahomby indrindra ho an'ny Android
Raha matory lalina ianao ary sahirana vao mifoha, na dia mandeha aza ny fanairana dia mety ...
Salama sonia, sonia antontan-taratasy avy amin'ny finday avo lenta
Hello Sign dia rindranasa ahafahantsika manao sonia ireo antontan-taratasy tonga aty aminay, fa tsy mila manonta azy ireo sy ny korontana rehetra aterak'izany, tena mora tokoa.
Samsung Galaxy S4, ny sasany amin'ireo fiasa mahaliana indrindra ao aminy
Air View sy Sound & Shout dia fiasa vaovao roa an'ny Samsung Galaxy S4 izay ho hitanao fa tsy mampino amin'ireo horonantsary nataon'i Samsung mivantana.
Chameleon Launcher 2.0, mifanaraka amin'ny smartphone ankehitriny
Manana fanavaozana vaovao momba ilay launcher malaza ho an'ny takelaka izahay, ary io no nanombohana ny Chameleon Launcher 2.0 ary izao dia mifanaraka amin'ny smartphone, farany
Magic the Gathering: Duels of the Planeswalkers 2014 tonga amin'ny Android
Azontsika atao koa ny manana ny anjaran'ny TCG amin'ny Android miaraka amin'ny Magic The Gathering.
Fampisehoana feno, hanararaotra ny efijery manontolo an'ny fitaovanao
Fullscreen dia rindranasa maimaimpoana avy amin'ny Play Store izay hanampy antsika hahazo tombony betsaka amin'ny efijery misy ny terminal Android anay.
Tantara toy ny kilalao: potipotaho!, Ilay saga Pixar mahafinaritra nifanandrify
Ny saga Pixar mahafinaritra, Toy Story, dia tonga amin'ny Android.
Google Keep, ilay fampiharana Google vaovao
Omaly vao nirotsaka ny fampiharana Google vaovao hamoronana naoty, antsoina hoe Google Keep, izay ahafahantsika mamorona naoty, manampy sary, sy maro hafa.
Stargate: SG-1 tsy afa-po, sci-fi miaraka amina Espaniola
Alkaris Interactive, andorrando studio, mitsabo anay amin'ny Stargate: SG-1 Unleashed.
Manampia sidebar azo namboarina ho an'ny birao misy anao amin'ny Glovebox Launcher
Androany izahay dia mitondra mailaka aminao izay hanisy sisin-dàlana amin'ny birao izay tena azo ovaina antsoina hoe Glovebox Launcher. Andramo izany dia omeo ny hevitrao.
Atrium, solon'ny fampiharana Facebook
Androany izahay dia mitondra rindranasa iray izay hahatonga anao hanadino ireo tsy fahombiazana rehetra entin'ny fampiharana Facebook ho an'ny Android ho an'ny Android, ny anarany dia Atrium ary hahagaga antsika izany
Fampiharana Chorras amin'ny herinandro
Amin'ity fizarana vaovao fampiharana chorras amin'ny herinandro ity dia tianay ny mampiseho ny Penis Size Calculator.
Temple Run: Oz tonga amin'ny Android
Ny fandefasana ny lalao ho marketing amin'ny sarimihetsika vaovao dia tsy isalasalana fa fahombiazana. Temple Run: Oz, no ohatra vao haingana indrindra.
Metal Slug X dia tonga amin'ny Android hampatsiahy ny taloha
Ny kinova vaovao an'ny lalao manan-tantara Metal Slug X dia miaraka amin'ny fanatsarana ny kinova teo aloha, izay mahatonga azy io ho lalao mampiankin-doha sy mampiala voly kokoa.
DashClock, widget fanidiana hidin-trano
DashClock dia rindranasa Open Source noforonin'ny mpanamboatra Google, Roman Nurik izay ahafahantsika manamboatra ny efijery hidin-tsika.
Ny Sandbox, ho Andriamanitra amin'ny Android
Ny Sandbox dia boaty fasika an-tsary izay ahafahantsika manao izay rehetra eritreretintsika araka izay vitantsika.
ChatOn, mpisolo toerana tsara an'ny WhatsApp
ChatOn dia fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo ary maro hafa izay hahatonga antsika hanadino tanteraka ny WhatsApp.
Mendrika handoa vola ve ny fampiasana WhatsApp?
Mijanona tsy hanolotra serivisy maimaimpoana ny WhatsApp. Raha manohy mampiasa an'io serivisy io ianao dia mila mandoa 0,89 cents isan-taona, mendrika aloa ve izany?
Pokémon TV, ny andiany amin'ny findainao
Pokémon dia tonga amin'ny telefaonintsika. Mazava ho azy, amin'ny endrika andian-tantara miaraka amin'ny Pokémon TV.
Fizarana vaovao amin'ny Androidsis izay tianay ny manangona ny fampiharana chorras tsara indrindra amin'ny herinandro.
Contacts +, fampiharana maimaim-poana hitantanana ny fifandraisana
Contacts + dia fampiharana maimaim-poana tanteraka ary misy amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Play Store izay hanatsarantsika ny fitantanana ny fifandraisantsika.
Fampiharana SumUp handoavam-bola amin'ny carte de crédit
SumUp dia vahaolana hanavaozana ny orinasanao ary hahafahanao manaiky ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit na debit, na Visa na Mastercard.
DoCoMo dia manolotra fampiharana fandikan-teny miaraka
Isan'andro dia zava-dehibe kokoa ny baikon'ny fiteny maro. Amin'ny tontolo manerantany, na dia ny fitenin'i Cervantes aza dia ...
Vector, parkour amin'ny findainao
Izahay dia mitondra anao Vector, lalao hazakazaka lehibe tsy misy farany mifantoka amin'ny parkour.
RIOT, fihetsiketsehana amin'ny finday
Miresaka momba ny RIOT izahay, tolo-kevitra mifantoka amin'ny fikorontanana eny an-dalambe izay mahaliana tahaka ny voalohany.
Ampiasao ny Android ho fanaraha-maso lavitra
Amin'ny Media Remote for Android dia azonao atao ny mamadika ny findainao na ny takelakao ho fanaraha-maso lavitra ho an'ireo fitaovanao elektronika
MWC 2013, Sony dia manomana ny lozisialy Play Station 4 ho an'ny Android sy iOS
Sony dia manomana fampiharana ho an'ny Android sy iOS izay ahafahantsika milalao lalao mivantana amin'ny finday avo lenta na ny takelaka.
Google Music sy ny tombony ary ny asany
Tonga tany Espana ny Google Play Music ary tao amin'ny AndroidSIS dia lazainay anao rehetra ny momba ny asany sy ny tombony azo avy aminy
Google Drive dia mamela anao hilalao horonantsary amin'ny alàlan'ny streaming
Ny serivisy fitahirizana rahona Google Drive dia nohavaozina ary ankehitriny dia milalao video amin'ny alàlan'ny streaming
Market Helper, ilay mpanampy hampidina fampiharana
Miaraka amin'ny Market Helper dia afaka misintona fampiharana avy amin'ny Google Play ianao na dia tsy miseho tampoka aza ny ramanavy amin'ny valin'ny fikarohana.
Mobeam, fomba vaovao handoavana ny horonantsary mozika
Mobeam dia mikasa ny hikapoka ny tsenan'ny fampiharana Android amin'ny fampiharana izay hanamora ny fampiasanay ny finday handoavana vola
Antivirus tsara indrindra ho an'ny Android
Zava-dehibe tokoa ny fitazonana ny terminal Android antsika ho voaro amin'ny fidirana tsy ara-dalàna na amin'ny virosy izay ...
The Simpsons: Springfield dia tonga amin'ny Android
Homer sy ny orinasa dia tonga amin'ny Android miaraka amin'ny The Simpsons: Springfield.
Sintomy ary apetraho ny kitendry Samsung tany am-boalohany ho an'ny MIUI, ICS ary Jelly Bean roms
Tutorial hametrahana ny Keyboard Samsung tany am-boalohany amin'ny MIUI, Ice Cream Sandwich na Jelly Bean rom.
Snapkeys Eny (BETA), fitendry mahatalanjona sy maimaim-poana ho an'ny Android
Snapkeys Si (BETA) dia klavie fanavaozana tanteraka ho an'ny Android izay azontsika antoka fa hanamarika mialoha sy aorian'ny tontolon'ny fitendry.
Mivoaka izao ny Metal Slug 2
Metal Slug 2 dia misy ao amin'ny Google Play Store avy amin'ny SNK Playmore sy DotEmu.
Tonga any Valentine aiza ny fankalazako?
Aiza ny fankalazako? dia havaozina amin'ny vanim-potoanan'ny Andron'ny Mpifankatia, nahazo ambaratonga vaovao 12 miaraka amin'i Swampy sy Perry.
Ao amin'ny Google Play izao ny charger tsy misy tariby Nexus 4
Ny finday Nexus 4 dia afaka ampiakarina izao nefa tsy mila tariby noho ny fitaovana fampiasa ao amin'ny Google Play Store
Blitz Brigade toa tsara
Tsy mbola misy daty voafaritra, fa ny Blitz Brigade an'i Gameloft dia toa tsara kokoa noho ny tsara.
Fampiharana Android voalohany an'ny Mega: MegaManager
Fehezo ny serivisy fampidinana Mega vaovao avy amin'ny findainao miaraka amin'ny MegaManager, ilay fampiharana voalohany mifanaraka amin'ny sehatra Android
Top 5 lalao multiplayer an-tserasera amin'ny Android
Ao amin'ny Googlelizados dia nanao safidy momba ny lalao multiplayer an-tserasera 5 tsara indrindra izay misy ao amin'ny Google Play ...
Carbon dia iray amin'ireo mpanjifa Twitter feno sy mahomby indrindra ho an'ny Android azo alaina ao amin'ny Google Play Store ankehitriny.
Ny divay dia hamela anao handefa programa Windows amin'ny Android
Fantatra amin'ny tontolon'ny Linux ny divay satria mamela anao hametraka rindranasa Windows amin'ity fizarana maimaimpoana ity. Ary te-ho tonga amin'ny Android i Wine.
Mampitandrina anao i Capptura raha misy manandrana manokatra ny smartphone
Capptura dia rindranasa espaniola mandefa sary ho anao, nalaina tamin'ny fakantsary anoloana ny telefaonanao, raha misy manandrana mamoha azy
X-Plane 9, simulator an'habakabaka tsotra sy mahafinaritra ho an'ny Android
Lalao sidina azo tanterahina, ampidino maimaim-poana ny X-Plane 9 ary manapaka ny lanitra
Angry Birds Star Wars Mahavariana Episode Hoth
Angry Birds Star Wars dia manohy mandray fanavaozana tsy tapaka. Fotoana izao hamitana ny fizarana Hoth-centric.
LifeKraze, tambajotra sosialy miorina amin'ny tanjona sy tanjon'ny tena manokana
Vao tonga tao amin'ny Google Play Store, ny tambajotra sosialy LifeKraze dia miorina amin'ny fahombiazany amin'ny fizarana ireo tanjona sy tanjona samihafa napetraka amin'ireo mpampiasa hafa
Temple Run 2 dia misy izao
Afaka miditra amin'ny Google Play Store ianao izao ary misintona Temple Run 2. Mandehana!
Duncan sy Katy, lalao Espaniola mampiala voly
Duncan sy Katy dia lohateny vaovao sy mahafinaritra ho an'ny Android novolavolaina tany Espana.
Ikaruga, tantara iray hafa tonga amin'ny Android
Klasika tsara iray hafa, navoaka iraika ambin'ny folo taona lasa, tonga amin'ny Android. Ny fitifirana dia Ikaruga.
Lalao fisotroana Android tsara indrindra
Efa eo an-tampon'ny havoanan'ny volana Janoary isika izao ary fotoana atahorana ho an'ny rehetra izany. Noho io antony io dia betsaka ny olona maniry ny hihaona ...
Manaiky ny fandoavam-bola Google Play izao ny WhatsApp
Ny serivisy fandoavam-bola amin'ny magazay Google Play dia miasa amin'ny alàlan'ny menio anatiny tsotra ao amin'ny fampiharana WhatsApp
Home dia manana ny mety hahatongavana amin'ny Android
Ny lalao horohoro Indie dia tonga amin'ny iOS sy Android.
Google sy ny lisitra miaraka amin'ireo lalao tsara indrindra tamin'ny 2012
Google dia nanolotra lisitr'ireo lalao alaina indrindra amin'ny Android tamin'ny 2012, fahagagana ary lalao efa fantatra hanamarihana ny taona
Tonga tao amin'ny Android ny Slug Metal
Ny arcade Metal Slug mahazatra dia tonga amin'ny Android avy amin'ny SNK Playmore sy DotEmu.
Soulcraft, ny RPG izao dia azo sintonina ao amin'ny Google Play
Soulcraft dia RPG nandrasana efa ela izay niditra beta tamin'ny volana Janoary ary farany azo alaina ao amin'ny Google Play Store ihany.
Aiza ny fankalazako?, Lalao Krismasy vaovaon'i Disney
Raha miditra amin'ny Swampy sy Perry karismatika amin'ny lalao Krismasy isika dia Aiza ny fankalazako?
Ny lalao sy ny fampiharana tsara indrindra amin'ny taona
Na dia tsy lisitra ofisialy aza izany satria hitantsika ao amin'ny App Store miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra sy ...
Ampiasao i Emma handrehitra mora foana ny Sony Xperia
Emma dia rindranasa Android kely azontsika ampiasaina hanaparitahana ireo finday Sony Xperia.
Andiana fanomezana (IX): Horn
Androany amin'ny Lalao Gift dia miresaka momba an'i Horn isika, lalao mahafinaritra mahafinaritra.
EpiX, lalao espaniola vaovao, tonga amin'ny Android
Ny Spaniards of Blinzy dia manana lalao vaovao ho an'ny Android, EpiX.
Lalao fanomezana (VII): GTA III
Manararaotra ny zava-misy fa isika dia amin'ny herinandro fanombohana ny fanontana ny tsingerintaona nahaterahana GTA: Vice City, amin'ny Lalao ...
Pendulo Studios 'Omaly tonga amin'ny Android
Ny iray amin'ireo famoronana farany avy amin'ny olona ao amin'ny Pendulo Studios, omaly, dia tonga amin'ny Android.
Slice fitendry - ny fitendry izay tezitra mafy ho an'ny mpampiasa Android sy ny mpilalao
Slice Keyboard dia fampiharana Android mahaliana miasa amin'ny takelaka manomboka amin'ny 7 santimetatra mandroso, manolo ny fitendry virtoaly mahazatra.
WhatsApp ahoana no fiasan'ny kinova voaloa?
WhatsApp sy ny marina momba ny serivisy maimaimpoana na karama aorian'ny fitsarana herintaona
Sets fanomezana (V): Asphalt 7
Ny Set Gift Gift androany dia feno fiara, Asphalt 7.
Google Drive ho an'ny Android dia manampy editor amin'ny takelaka
Google Drive for Android dia nahazo fanavaozana vaovao izay miavaka amin'ny alàlan'ny fampidirana mpamoaka lahatsoratra hamoronana sy fanovana ny takelaka.
Fanolorana fanomezana (IV): "Ady maoderina 3: Firenena lavo"
Izahay dia mitondra anao ny andiany fahefatra amin'ny Lalao homena, tonga lafatra amin'ny vanim-potoanan'ny Noely. Androany: "Ady maoderina 3: firenena lavo"
Idrod Music Free, avadiho ny iPod ho Android iPod
Mpampiasa haino aman-jery maimaimpoana maimaimpoana izay hanome ny Android ny fisehoan'ny Apple iPod Classic tany am-boalohany
Pango, Boky mifandraika amin'ny ankizy ao an-trano
Pango dia andiam-boky mifandraika amin'ny fitaovana Android, izay ampiasain'ny ankizy sary an-tsaina ny fianarana.
Pixlr Express, amboary sary misy fiatraikany matihanina amin'ny Android
Pixlr Express dia fitaovana iray feno hanovana sary amin'ny findainao Android na takelaka misy ny vokatra sy ny safidin'ny matihanina
Mandrosaha amin'ny fomban'ny Windows 8 ary maimaim-poana
Mpandefa maimaim-poana amin'ny fomba Metro madio Windows Phone 8 ho an'ny Android anao izay hanome anao fanovana rivotra madio
Ny tombontsoa vaovao amin'ny fampiasana Skype ho an'ny Android amin'ny Tablet
Skipe dia nohavaozina mba handinihana ny toerana rehetra ananan'ny Android Tablet, izay mora kokoa noho ny talohan'ny fihaonambe tamin'ny fitaovana voalaza.
Nexus 4 Toolkit V1.0 fitaovana rehetra-amin'ny-iray
Nexus 4 Toolkit V1.0 dia fitaovana iray manontolo izay ahafahantsika mametraka mpamily Windows, root, Recovery ary maro hafa.
Apex Launcher novaina hanohanana ny Android 4.2
Apex Launcher dia nohavaozina mba hanohanana ny kinova Android, 4.2 ary manararaotra manitsy lesoka madinidinika
Smart Launcher, mpandefa maivana sy mahomby
Smart Launcher dia mpandefitra minimalista sy miasa afaka apetraka amin'ny kinova Android lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.1.
Olana amin'ny fifandraisana WhatsApp sy Movistar
WhatsApp dia, hoy i Movistar, tompon'andraikitra tamin'ny fianjeran'ny rafitra tamin'ny 5 Novambra, inona ny fepetra horaisin'ilay orinasa hisorohana ny tsy fahombiazana vaovao?
La Voz dia manana fampiharana ofisialy amin'ny Android
Ny programa fahitalavitra La Voz izao dia manana ny fampiharana azy ho an'ny telefaona finday Android ary tao anatin'ny fotoana fohy dia nahatratra 200.000 ny fisintomana
Ahoana ny fametrahana ny sary mifandraika amin'i Google amin'ny Resolution avo
Miaraka amin'ny Sarin'ny fifandraisana HD dia hanova ny sarin'ny fifandraisanay Google izahay ho an'ireo izay manana vahaolana hatramin'ny 256 mpx.
Claystone Launcher, mpandefa 3D mahatalanjona
Claystone Launcher dia mpandefa 3D izay misy maimaim-poana amin'ny Android amin'ny Play Store.
Fampiharana ofisialy Ubunlog ao amin'ny Play Store
Ubunlog dia rindranasa maimaimpoana ho an'ny Android, azo alaina ao amin'ny Play Store izay hahafantaranao ny zava-drehetra mifandraika amin'ny Linux sy Ubuntu.
Cloud Vodafone, fiarovana ary fitahirizana rahona
Vodafone dia manatevin-daharana ny fanovana ny politikantsika sy ny tolotra anay, toa an'i Movistar sy Yoigo, ary manolotra serivisy fitehirizana antsoina hoe Vodafone Cloud
Sary mivantana mivantana momba ny Hallowen
Ny fanangonana rindranasa maimaimpoana izay manolotra antsika sary mihetsika na antsoina hoe Live Wallpaper.
Mpanampy manokana ho an'ny Android
Ny mpanampy dia iray amin'ireo fampiharana folo tsara indrindra tamin'ny taona 2011 araka ny gazety New York Times, ary ny marina dia mendrika hanandramana izany.
Hallowen amin'ny fitaovanao Android
Hallowen dia iray amin'ireo antoko malaza indrindra eto an-tany, ary izany no antony tiako hizarana rindranasa maimaimpoana roa ho an'ny Android
Lohahevitra Neon Red sy Neon Yellow ho an'ny roms miorina amin'ny CyanogenMod 10
Lohahevitra roa vaovao ho an'ny romantsika miorina amin'ny CyanogenMod 10 Android 4.1.1 Jelly Bean, Neon Red ary Neon Yellow
Samsung Galaxy Music, mankafy mozika noho ireo mpandahateny amin'ny teknolojia SRS
Tsy mila mitondra ny MP3-nao intsony ianao noho ny Samsung Galaxy Music, smartphone Android vaovao sy mpandahateny miaraka amin'ny haitao SRS. Ankafizo ny mozika.
Launcher LG Optimus UI 2.0 ho an'ny ROM miorina amin'ny Cyanogen
Sintomy ary apetraho amin'ny alàlan'ny fanarenana ny LG Optimus UI 2.0 Launcher tany am-boalohany amin'ny ROM mifototra amin'ny CyanogenMod
Lohahevitra IOS 1.0 ho an'ny CM9 sy CM10
Fandraisana anjara amin'ny fampidinana mivantana sy fametrahana lohahevitra miorina amin'ny iOS, ankoatry ny fampianarana amin'ny alàlan'ny tutorial-video ny fomba fametrahana sy fampiharana.
Facebook ho an'ny Android, fampiharana teratany amin'ny faran'ny 2012
Ny kinova vaovao an'ny Facebook ho an'ny Android dia ho hita alohan'ny faran'ny 2012, ho haingana kokoa ary natao ho fampiharana Android teratany
NOOZY Audio Player, mpilalao haino aman-jery mahatalanjona ho an'ny Android
NOOZY Audio Player dia mpilalao maimaim-poana ho an'ny Android izay misy horonantsary, fampitoviana ary fiasan'ny radio amin'ny fitabatabana ankoatra ny zavatra hafa
Samsung Galaxy S, TouchWiz launcher an'ny Galaxy S3
Tutorial ho an'ny fampidinana sy fametrahana amin'ny alàlan'ny famerenana ny TouchWiz Launcher tany am-boalohany an'ny Samsung Galaxy S3 izay natokana ho an'ny Samsung Galaxy S
Spotbros ny revolisiona amin'ny tambajotra sosialy sy ny hafatra WhatsApp
Spotbros dia tambajotra sosialy revolisionera izay misy fiasa miavaka toa ny hafatra instant WhatsApp.
Kitendry manana endrika Xperia ho an'ny Samsung Galaxy S
Sintomy ny klavier Xperia ho an'ny Samsung Galaxy S, miaraka amina fampiasa toy ny fanoratana swipe.
WhatsApp Messenger avy amin'ny Windows miaraka amin'ny BlueStacks
BlueStacks, ilay emulator Android tsara indrindra ho an'ny Windows, izao dia mamela anao hampiasa WhatsApp Messenger tsy misy fahasarotana amin'ny fandefasan-kafatra maimaimpoana maimaimpoana
Fanavaozana fikojakojana vaovao ho an'ny WhatsApp
Navoaka ny fanavaozana WhatsApp vaovao ho an'ny Android izay tompon'andraikitra amin'ny famahana olana goavana iray misy fiatraikany amin'ny kinova taloha.
Atom Launcher, Launcher mahafinaritra ho an'ny Android 4.0 ICS
Atom Launcher dia mpandefitra maimaimpoana mifanentana amin'ny Android 4.0 na avo kokoa, iray amin'ireo kanto sy fampiasa indrindra izay hitantsika maimaimpoana.
Android Manager ho an'ny Windows Linux sy Mac
Android Manager dia programa multiplatform, maimaim-poana tanteraka izay ahafahantsika mifehy ireo endri-javatra manan-danja 9 amin'ny fitaovantsika.
Fonosana widgets ho an'ny fomba fijery maimaim-poana
Fonosana widget maimaim-poana ho an'ny fitaovana rehetra amin'ny fisintomana mivantana manomboka eto.
MXHome Launcher, mpamindra mahafinaritra
Ny MXHome Launcher no fanoloana an-trano mahavariana indrindra hitanao amin'ny fitaovanao Android.
Fabrik (mpamaky ebook cloud) mpamaky boky mifanentana amin'ny Dropbox
Fabrik (mpamaky ebook cloud) dia mpamaky ebook maimaimpoana tanteraka hita ao amin'ny Google Play Store.
Inona no azontsika atao amin'ny fakantsary finday?
Ny fomba tsara indrindra hanararaotana ny fakantsary finday amin'ny Android dia amin'ny alàlan'ny fampiasana ny sasany amin'ireo rindranasa izay atolotray eto
Ecce Homo, fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android
Ecce homo dia rindranasa maimaimpoana ho an'ny Android izay hanahaka ny fandravana an'i Cecilia Gimenez miaraka amin'i Borceo Ecce Homo.
Ahoana ny fomba hanaovana ny Android ho toy ny Windows Phone miaraka amin'ny Launcher 7
Launcher 7 dia mpandefa Launcher na Home, izay hanomezanay ny fisehoan'ny Windows Phone rehetra amin'ny fitaovana Androd.
Miui Music Player, azo alaina maimaimpoana
Miui Music Player no fampiharana mozika teratany manaitra ho an'ny Miui roms.
YoutubeDownloader Apk misy amin'ny xdadevelopers
YoutubeDownloader dia fampiharana maimaim-poana tanteraka ho an'ny Android izay hampiakaranao ny atiny avy amin'ny You Tube
Activision Anthology, kilalao mahazatra amin'ny findainao
Milalaova kilalao Atari 2600 maimaim-poana amin'ny telefaona finday Android anao noho ny Activision Anthology
Maninona raha hangina?
Maninona raha hangina? dia fampiharana maimaim-poana avy amin'ny Play Store izay hofehezinay ny ora hanajanonana ny fampandrenesana.
Mpandefa Android Jelly Bean mahafinaritra
Mpandefa android vaovao natao hanamboarana ny fomba fijery ny Android Jelly Bean
Omega StatusBar, bara fiasa mifanaraka amin'ny zavatra ilainao
Omega StatusBar dia manao amin'ny bara asan'ny Android anao, izay ataon'ny Launcher rehetra amin'ny biraonao, ovao izy ary ampio fiasa vaovao.
Call of Mini: Zombies, hetsika bebe kokoa ary undead
Call of Mini: Zombies dia lalao zombie sy undead ho an'ny Android izay ahafahantsika mamorona ekipa mpilalao efatra hiady
Antiroid, mitadiava fomba hafa maimaim-poana amin'ny fampiharana voaloa
Antiroid dia tranokala natokana hanehoana anay safidy hafa maimaim-poana amin'ny fampiharana Android be karama.
Ny MIUI V4 an'ny MiHome Launcher azy manokana dia manan-kery ho an'ny fitaovana rehetra
MiHome Launcher dia rindrambaiko noforonin'ireo mpandraharaha Xiaomi, izay toa ny ROM MIUI V4 farany.
Ocean Tower, manangana tranobe mpamaky trano anao amin'ny Android
Ocean Tower dia lalao simika sy fanamboarana izay tsy maintsy atsanganantsika ny trano fanaovana azy manokana ary haingo azy araka izay itiavantsika azy
Sintomy ny Flip Clock amin'ny fomban'ny HTC SENSE
Fandraisana anjara amina rindranasa roa izay miaraka mamorona ny famantaranandro sy ny fotoana widget amin'ireo terminal HTC, Flip Clock style interface SENSE HTC.
Zeam Launcher 3.1.10 Maimaimpoana ary ny maivana indrindra
Zeam Launcher no mpandefa fampiharana Android maivana sy miasa indrindra izay azonao jerena ao amin'ny Play Store.
XenoAmp beta kinova 11, mpilalao audio mahatalanjona
XenoAmp dia mpilalao mozika maimaimpoana tanteraka, noforonin'ireo mpamorona xdadevelopers ary manana endrika sary mahatalanjona
ssLauncher, mpandefa hafa ho an'ny Android anao
ssLauncher dia mpandefa mpamorona noforonin'ny ekipa mpamorona xdadevelopers. Launcher hafa miaraka amina kalitao mihoampampana.
1QR, ny fampiharana tsara indrindra amin'ny kaody QR?
1QR dia iray amin'ireo mpamaky kaody QR tsotra indrindra sy azo ampiasaina ary haingana indrindra hita ao amin'ny magazay nomerika Google Play Store
Neuroshima Hex, ady ary paikady mifototra amin'ny fihodinana
Heuroshima Hex dia lalao paikady mifototra amin'ny turn ho an'ny Android aingam-panahy avy amin'ny lalao birao sy karatra
Chameleon Launcher Beta, mpandefa manokana ho an'ny Tablets
Chameleon Launcher dia mpandefa iray feno fiasa sy fiasa vaovao hanome ny fitaovana Android karazana Tablet misy fiasa vaovao.
ClipSync, fampiharana fampifanarahana finday ho an'ny Android
ClipSync dia rindranasa Android natao hampifanarahana ny fitaovana Windows sy Android
Ny fampiharana NASA ofisialy amin'ny Android anao
Ny fampiharana NASA ofisialy dia tonga amin'ny Android hanolotra sary, horonan-tsary ary fampahalalana momba ny fitrandrahana eny amin'ny habakabaka
Root ny terminal anao amin'ny Z4root
Z4root dia fampiharana ho an'ny Android izay hanampy antsika hanongotra terminal be dia be. Azonao atao ny misintona azy avy eto eto maimaim-poana.
WhatsApp for Android nahazo fanavaozana
Navoaka ny fanavaozana WhatsApp vaovao ho an'ny Android izay misy fanatsarana samihafa sy fampiasa vaovao, ary koa fanitsiana ankapobeny.
Ahoana ny fomba famoronana backup amin'ny alàlan'ny Titanium Backup
Video-tutorial momba ny fomba famoronana backup ary fanarenana amin'ny laoniny amin'ny fampiasana Titanium Backup
Stereomood, ny mozikanao arakaraka ny toe-po
Stereomood dia manolotra hira an'arivony ho anao hifandray amin'ny toetranao ary hanararaotra hihaona amin'ireo mpanoratra vaovao
Ny Plex ho an'ny Android dia nohavaozina amin'ny endrika vaovao maro
Navoaka tamin'ny fanavaozana ny Android ny fanavaozana vaovao ny ivon-haino aman-jery Plex, izay manampy fampiasa sy fanatsarana vaovao.
Big Launcher 2.0, ampanjifaina mora foana ny Android anao
Ataovy amboarina ny sary masina sy ny fidiranao amin'ny Android amin'ny Big Launcher 2.0, fomba kanto sy maro loko hanomezanao ny mombamomba ny findainao na ny takelakao.
Apex Launcher, mpandefa tsara indrindra ho an'ny Android 4.0
Apex Launcher no mpandefa tsara indrindra ho an'ny Android 4.0, ary azontsika alaina maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Hihaona amin'ny kinova famaritana an'ny Google Chrome, ho an'ny Jelly Bean sy ICS
Google Chrome dia nohavaozina amin'ny kinova farany avy amin'ny beta, avy amin'ny Android 4.0 miakatra, manome hafainganam-pandeha lehibe kokoa
Android 4.1 dia tsy hanohana Flash Player
Adobe dia nanambara fa ny android 4.1 Jelly Bean dia tsy hanana fanohanan'ny Flash Player ary hametra ny fampidinana azy ao amin'ny Google Play.
Winamp 1.3 miaraka amin'ny fanatsarana sy vaovao amin'ny Android
Winamp, iray amin'ireo mpilalao haino aman-jery tsara indrindra, dia nohavaozina amin'ny Android mba hampihatra endri-javatra vaovao sy fanatsarana.
WinZip dia manomboka amin'ny Android
WinZip, ilay rindranasa malaza ho an'ny Windows, dia natomboka tao Androd, ahafahantsika mitantana ireo rakitra voageja avy amin'ny finday.
Ahoana ny fametrahana APK's amin'ny Windows amin'ny alàlan'ny milina virtoaly sy ny Android SDK
Tutorial-video momba ny fametrahana ny rindranasa Android zanatany ao amin'ny Windows, noho izany hampiasainay ny Android SDK sy ny terminal Ms-dos.
Ny Xbox Live-ko ​​misy izao ho an'ny Android
Microsoft dia nandefa ny fampiharana Xbox Live ho an'ny Android, mamela ny mpilalao hanamarina ny kaontiny sy ny statistikan'izy ireo amin'ny findainy.
Million Moments, ny Sony solony ho an'ny sarinao
Million Moments dia rindrambaiko Sony izay manafaingana ny fizotry ny fandaminana ny sary mba tsy ho lavorary ny galerianao.
Google Maps sy Google Earth no havaozina
Google Maps dia nohavaozina, ahafahantsika misintona sarintany misy firenena 100 amin'ny fitaovantsika android tsy andoavam-bola.
Androidsis App ofisialy hita ao amin'ny Play Store
Premiere ao amin'ny Play Store an'ny fampiharana androidsis ofisialy vaovao, izay ahafahanao miditra amin'ny bilaogy androidsis.com
Sintomy ny Flipboard, ny fahatsapana ny fotoana amin'ny Android
Flipboard dia mpamaky vaovao azo namboarina izay manana fidirana mivantana amin'ny Facebook sy Twitter ary ny safidy hizarana.
Wondershare Player, mpilalao horonantsary sy mozika maimaimpoana tanteraka
Wondershare Player dia mpilalao horonantsary azo alaina ao amin'ny Play Store maimaimpoana, misy ny fantsom-pifandraisana.
Samsung dia nanolotra Music Hub tany Espana, tao amin'ny Galaxy S III ihany
Miaraka amin'ny Music Hub, ny orinasa Koreana Samsung dia hanandrana hifaninana amin'ny iTunes sy Spotify ao amin'ny sehatry ny mozika amin'ny alàlan'ny streaming.
Ny divay sy ny Vintages World Edition, mpanampy divay amin'ny Android
Wines and Vintages World Edition dia mpanampy lehibe ho an'ireo mankafy divay tsara. Ho afaka hampitaha ny vidiny sy ny kalitao haingana ianao.
Vita, mpanampy feo feno ho an'ny Android
Vita dia rindranasa vaovao amin'ny teny espaniola natao ho an'ny Android, miaraka amina fiasa mitovy amin'ny an'ny mpanampy Siri amin'ny iOS.
iDisplay, manomboka amin'ny monitor PC mankany amin'ny finday amin'ny dingana iray
Miaraka amin'ny iDisplay dia afaka miasa miaraka amin'ireo sary mitovy amin'ny PC amin'ny findainao ianao, manafaka ny sehatry ny asa amin'ny monitor lehibe.
Inspektur fiarovana, fanaraha-maso avy amin'ny finday
Security Inspector dia fitaovana natao ho an'ireo mpanara-maso izay mila mitsitsy fotoana sy manatsara ny fahombiazan'ny teknolojia finday
Sintomy ny S-Voice ho an'ny Samsung anao amin'ny Android 4.0
XDA dia namoaka ny .apk an'ny S-Voice an'ny Samsung Galaxy S3 ho an'ny sisa amin'ireo terminal Samsung miaraka amin'ny Android 4.0
Torque OBD2, solosaina eny an-tsambo tena izy
Torque dia fampiharana izay, amin'ny alàlan'ny adapter bluetooth, dia mifandray amin'ny solosain'ilay fiaranay mba hanaovana diagnostika feno
Soonr Scribble ho an'ny Galaxy Note: amboary ao anaty rahona ireo antontan-taratasinao
Tehirizo ary zarao ao amin'ny rahona Soonr ny antontan-taratasinao ary amboary ireo noho ny Galaxy Note miaraka amin'i Soonr Scribble.
SopCast dia eto: mijery fanatanjahan-tena amin'ny Android
Azonao atao izao ny manokatra rohy SopCast amin'ny terminal Android anao hijerena fanatanjahantena mivantana noho ity programa ity.
Mpilalao mitsingevana, Pop-up Play playback video
Floating Player dia fampiharana vaovao ahafahanao mankafy ny fiasa Pop-Up Play vaovao an'ny Galaxy S3 amin'ny telefaona Android rehetra.
DX Battery Booster, mahazoa ny baterinao
Battery Booster dia fampiharana avy amin'ny Play Store izay hanampy anay amin'ny fanjifana sy fikojakojana ny baterianay Android.
Ny dokam-barotra ao amin'ny bara fampandrenesana? Amboary izy amin'ny AirPush Detector
Ahoana ny fanesorana ireo doka sy doka hita ao amin'ny bara fampandrenesana Android amin'ny AirPush Detector, izay mamantatra ireo programa tompon'andraikitra
Ny fanairana amin'ny orana dia manaitra anao handray ny elo
Rain Alarm (Rain Alarm) dia mampandre anao amin'ny Android ny ranonorana manakaiky anao amin'ny fotoana tena izy
Mianara manao sary amin'ny findainao amin'ny Draw Something
Draw Something dia lalao fanaovana sary amin'ny fomba Ptionary tsara indrindra fa amin'ny fiononan'ny findainao.
Fidirana haingana sy fanaingoana amin'ny Widgets kanto
Fomba haingana idirana amin'ny asan'ny findainao sy hanome azy io ho an'ny tena manokana, Beautiful Widgets dia manana safidy maro.
BlackBerry Messenger amin'ny Android? Azo atao daholo ny zava-drehetra
Blackberry Messenger, serivisy fandefasan-kafatra mailaka malaza an'ny RIM dia mety hipetraka amin'ny Android tsy ho ela
OverSkreen: mpitety iray misy varavarankely mitsingevana
OverSkreen dia manolotra rafitra fikandrana mitsingevana, zavatra izay ho hitantsika ato ho ato amin'ny Android, fomba iray mahafinaritra sy mora handaminana ny birao Android-tsika.
Instagram, vonona hipetraka amin'ny Android
Toa ny momba ny sary izao no lohahevitra. Daniel mpiara-miasa amintsika dia nanolotra anay Pixlr-o-matic, fampiharana mahaliana an'ny ...
Pixlr-o-matic mpamoaka sary tsy azo ihodivirana ho an'ny Android
Ho anao malahelo izay tsy mahalala ity rindranasa ity dia hazavaiko amin'ny antsipiriany ny fomba fiasa sy ny fahaizany ...
Mamorona sary an-tsary anao miaraka amin'ny PhotoWall Live Wallpaper
Ankehitriny miaraka amin'ny PhotoWall Live Wallpaper ianao dia afaka manana ny sary namboarinao manokana sy sarimiaina hanananao azy amin'ny fitaovana Android rehetra
Mantano Reader. Mpamaky boky sy pdf mahay.
Ao amin'ny tsena dia mahita fampiharana marobe isika izay miasa ho mpamaky antontan-taratasy sy mpamaky boky, fa ny tsara indrindra sy ny feno indrindra dia tsy isalasalana fa Mantano Reader. Mantano Reader dia mpamaky antontan-taratasy sy mpamaky boky matanjaka izay mitondra safidy sy fitaovana maro: mampitombo ny zom-baravarana ary mampihena ny fanitsiana auto ny lahatsoratra amin'ny efijery. Io dia ahafahanao mitantana ireo rakitra amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny solonanarana sy teny miafina hiarovana ireo rakitra. Lahatsoratra ho an'ny lahateny, vakio hatramin'ny pejy iray mankany amin'ny fisie iray manontolo. Na an-tsoratra na an-tsary. Izy io dia ahafahana mametraka anotasy, tsoratadidy ary manoritra ny lahatsoratra. Ahafahanao mitady fampahalalana na teny amin'ny diksionera na amin'ny Internet (Google, Wikipedia, sns). Ireo rakibolana dia afaka atao an-tserasera na alaina mba hahitana azy ireo foana. Mode amin'ny alina, ho an'ny famakiana tsara kokoa amin'ny hazavana ambany. Safidy sy fitaovana ilaina maro hafa.
Esory Scalado, esory ireo singa tsy ilaina ao amin'ny sarinao.
Amin'ny alàlan'ny Scalado Delete dia afaka manafoana ireo singa izay tsy tadiavintsika amin'ny sary rehetra izahay. Maka sary fotsiny izahay ary mikasika ireo singa izay tsy tiantsika hiseho. Azontsika esorina koa ny olona, ​​ny zavatra, ny biby sns izay mihetsika ary manelingelina ireo sary nalaintsika.
Exodus Live Wallpaper: rindrambaiko minimalist ho an'ny Android
Exodus Live Wallpaper dia tantaram-pahavitrihana ho an'ny Android, miaraka amina endrika minimalist tonga lafatra mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa maro miaraka amin'ny fikirana fanaingoana maro.
1Weather dia manamarina ny toetr'andro amin'ny Android misy endrika minimalist
1Weather dia fampiharana fampiasa minimalist amin'ny famaritana mialoha ny toetr'andro amin'ny android, azontsika atao ny mifehy ny toetr'andro, ny hamandoana, ny orana ao anatin'ny segondra vitsy
TouchPal: ny safidy tsara indrindra amin'ny Swype amin'ny Android
TouchPal Keyboard no safidy tsara indrindra amin'ny Swype, tsy misy isalasalana fa fitendry finday haingana sy mahagaga, miaraka amin'ny fanampiana sarobidy avy amin'ny faminaniana lahatsoratra tonga lafatra
Mampidira rakitra marobe amin'ny rahona miaraka amin'ny Box sy ES Explorer
Ankehitriny miaraka amin'ny Box the cloud file system ary ES Explorer mpitantana rakitra ho an'ny Android dia afaka mampakatra rakitra marobe avy amin'ny finday avo lenta
Ankafizo ireo fampiharana Android 10 tsara indrindra tamin'ny 2011
Fampiharana Android tsara indrindra tamin'ny taona 2011, ao anatin'ny lisitr'ireo fampiharana folo tsara indrindra, asehonay anao ny mahasoa indrindra sy ilaina indrindra amin'ny Android-nao
Runtastic Pro: mpampiofana anao manokana amin'ny Android anao
Fanaraha-maso Runtastic Pro, refesina ny kilometatra kilaometatra, lanin'ny kaloria, ny hafainganan'ny fanatanjahantena ankafizinay, ny mpampiofana anao manokana amin'ny Android anao
Google Maps 6.0, sarintany ICS ary sarintany anatiny
Google dia manavao ny sarintany amin'ny kinova 6.0 miaraka amin'ny fikitika ny ICS sy ny vaovao lehibe toa ny fanaovana saritany anatiny
Ataovy mahazo aina sy lavitra kokoa ny android-nao
Fitaovana hiverina amin'ny Android mahazo aina sy lavitra kokoa.
Jorte, fandaminana tsotra ho an'ny Android
Miaraka amin'i Jorte dia afaka mandamina ny tenanao amin'ny fomba tsotra sy mahomby kokoa ianao noho ny findainao Android.
Mobile Odin Pro, tsy mora velively ny flashing
Tsy mora velively ny fandefasana ny Android-nay. Fantaro ny fomba!
Android dia mieritreritra ny olona rehetra, eny fa na dia ireo anti-panahintsika aza.
Android mieritreritra ny olona rehetra, tadiavo ny fomba!
Hitsahatra tsy hanangana Adobe Flash intsony i Adobe
Adobe Flash dia hitsahatra tsy hivoatra ho an'ny finday
Fifandonana an-dranomasina, famakafakana lalao
Famerenana ny Naval Clash, ny fidinan'ny fiaramanidina ho an'ny Android
Cloe, Mpanampy ny feo amin'ny Espaniôla
Ilay mpanampy amin'ny feo tsara indrindra ary amin'ny Espaniôla
MPAMONO KONTRAZA: ZOMBIES, Famakafakana lalao
Ny famerenako ny lalao zombie quintessential.
Sleep Manager, fampiharana ho an'ny Android izay mandrefy ny habe sy ny kalitaon'ny torimason'ny mpampiasa azy
Sleep Manager, fampiharana ho an'ny Android izay mandrefy ny habeny sy ny kalitaon'ny torimason'ny mpampiasa azy.
Arma II: Firing Range THD, lalao kalitao ampandehanin'i Nvidia Tegra
Ny lalao lehibe Achilles an'ny Android dia lalao video foana. Mandra-pamoakan'i Nvidia ny kapiny ...
Hotmail ho an'ny Android misy amin'ny Android Market
Hotmail ho an'ny Android misy amin'ny Android Market.
Samsung Premium Apps Store: magazay fampiharana vaovao ho an'ny Android.
GingerMaster: Trojan Android mampidi-doza indrindra, raha ny fikarohana natao
GingerMaster: Ny Trojan Android mampidi-doza indrindra, araka ny fikarohana.
Firefox 6.0 ho an'ny Android dia efa hita ao amin'ny Android Market
Firefox 6.0 ho an'ny Android dia misy amin'ny Android Market ankehitriny.